घरमा भ्यागुतो आयो भने शुभ कि अशुभ के हुन्छ ? सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा – Krazy NepaL
घरमा भ्यागुतो आयो भने शुभ कि अशुभ के हुन्छ ? सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा
November 11, 2020 1014
आफ्नो सिकारमा केन्द्रित ऊ कहिले चाल मारेर बिस्तारै घिस्रे झैँ गर्थ्यो, कहिले भने मज्जैले उफ्रिन्थ्यो। एउटा कीरालाई पछ्याउँदै जाँदा ऊ भान्साभित्र छिर्योै र कताकताबाट एउटा बडेमानको कराइभित्र खस्यो।
भ्यागुताको समाज हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने कस्तो हुन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यसैले ‘भाग मिल्खा, भाग’ भने झैँ गरी अरु भ्यागुताहरूले ‘भाग साथी, भाग’ भनेर कराउने चलन छ कि छैन, त्यो त थाहा छैन।
मानिसले ‘उफ्री भ्यागुतो, उफ्री’ भनेछन् भने पनि उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन, त्यो पनि थाहा छैन। तर, उसको शरीरले नै उसलाई ढाँट्ने सम्भावना कमै होला र यदि जीजीविषा सबै प्राणीको नैसर्गिक गुण हो भने, पानी तात्दा भ्यागुतो पनि भाग्नैपर्ने हो।
हामी त मान्छे हौं। कथामा कराइभित्रको भ्यागुतो झैँ यथार्थबाट बेखबर हुने ‘सुविधा’ हामीलाई छैन। यो देशलाई राष्ट्रका रूपमा बाँधिराख्ने सूत्रहरू केके बाँकी छन्, केके कुहिइसके र के नयाँ सृजना गर्न सक्छौँ?
यी सबका बारेमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्ने र काममा जुट्ने नगरे यसरी हावामा झुन्डिएर कुनै पनि राष्ट्र लामो समय टिक्न सक्दैन। सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रसहितको समृद्धि नै सम्भवतः देशलाई बलियो राष्ट्रका रूपमा बाँध्न सक्ने तत्व हो।
तर, सामाजिक न्यायको लोकतन्त्रको अर्थ नागरिक जीवनमा अनुदित हुँदा के हुन्छ? आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउँदै समृद्धि प्राप्त गर्ने उपायहरू केके हुन सक्छन्? परम्परागत पार्टीहरूको दिशाहीनता, नैतिकताको स्खलन,
हरेक दलभित्रभित्रै क्यान्सर झैँ हुर्किरहेको भ्रष्टाचार र अनेक रोगब्याधिले गर्दा पुरानै ढर्राले चलेका कुनै पनि पार्टीले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकिरहेका छैनन्।
जब धेरै कुरा ठीक छैन तब ‘सब ठीक छ’ भनेर बस्दा हात लाग्ने भनेको मृत्युमात्र हुन्छ। बिरामी छु भनेर पटक्कै स्वीकार नगर्ने रोगी आफ्नो रोगबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैन। मानिस हौँ हामी एक्काइसौँ शताब्दीका, कराइको भ्यागुतो झैँ बिस्तारै पाकेर मर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन।
Posted in धर्म/सस्कृति
Prev“अस्ट्रे’लि’याको सि’ड्नीमा २१ वर्षीया महिलाको अ’ श्लील भिडियो निकै भाइरल “(भिडियो सहित )”
Nextके तपाइँलाई थाहा छ ? ५ सयमा नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिम पाइन्छ भनि के छ त सुबिधाहरु
पहेलो दाँत तथा श्वास गन्हाउँने समस्याबाट यसरी पाउनुहाेस छुटकारा
पतिको मृ’त्यु भयो, सर्पले आफ्नो जीवन त्यागेर देखायो सतिप्रथाको रहस्य जान्नुहोस्
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45596)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24227)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (17160)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (15151)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (14080)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (13166)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (13016)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12612)